खरबुजा ठिक्क खाए औषधि, धेरै खाए विष ! | सुदुरपश्चिम खबर
गर्मी महिनामा खरबुजा निकै खाईन्छ। कोहिले यसलाई काटेर खान्छन् भने कोहिले यसलाई जूस बनाएर पिउँछन्। खरबुजाले शरीरलाई धेरै फाइदा पुर्याउने स्वास्थ्यविज्ञहरु बताउँछन्। तर खरबुजाको अत्याधिक प्रयोगले शरीरलाई नोक्सान पनि पुर्याउँछ । आज हामी तपाईलाई धेरै खरबुजा खानुको बेफाईदाको बारेमा बताउन गईरहेका छौ।
पेटसँग सम्बन्धित समस्याःखरबुजामा लाइकोपीन पाइन्छ। यसले शरीरलाई कैयौँ फाइदा पुर्याउँछ । तर लाइकोपीन धेरै भएको खण्डमा यसले नोक्सान पनि पुर्याउँछ । खरबुजा धेरै खाँदा भने शरीरमा लाइकोपीन धेरै मात्रामा हुन्छ र जसकारण अपच र वान्ता जस्ता समस्या हुन सक्छ।
हाइपरक्लेमिया हुन सक्छः खरबुजा धेरै खाँदा शरीरमा पोट्याशियमको स्तर सामान्यभन्दा बढी हुन जान्छ । यसले हाइपरक्लेमिया गराउन सक्छ । जसकारण अनियमित मुटुको धड्कन सहित विभिन्न हृदय सम्बन्धि समस्या निम्तिन सक्छ।
एलर्जी हुने डरः खरबुजा खानाले एलर्जी पनि हुन सक्छ।पाचनमा समस्याःसुत्नेबेला खरबुजा खाँदा पाचनमा समस्या हुन सक्छ।वजन बढ्नुः खरबुजामा प्राकृतिक चीनी पाइन्छ । जसकारण चाहिनेभन्दा धेरै खरबुजा खाँदा वजन बढ्न सक्छ। अधिक पानीका कारण खुट्टा सुन्निने , मृगौला कम्जोर हुने जस्ता समस्या पनि हुन सक्छन् ।
पेटसँग सम्बन्धित समस्याः खरबुजामा लाइकोपीन पाइन्छ। यसले शरीरलाई कैयौँ फाइदा पुर्याउँछ । तर लाइकोपीन धेरै भएको खण्डमा यसले नोक्सान पनि पुर्याउँछ । खरबुजा धेरै खाँदा भने शरीरमा लाइकोपीन धेरै मात्रामा हुन्छ र जसकारण अपच र वान्ता जस्ता समस्या हुन सक्छ।
एलर्जी हुने डरः खरबुजा खानाले एलर्जी पनि हुन सक्छ।पाचनमा समस्याःसुत्नेबेला खरबुजा खाँदा पाचनमा समस्या हुन सक्छ।वजन बढ्नुः खरबुजामा प्राकृतिक चीनी पाइन्छ । जसकारण चाहिनेभन्दा धेरै खरबुजा खाँदा वजन बढ्न सक्छ। अधिक पानीका कारण खुट्टा सुन्निने , मृगौला कम्जोर हुने जस्ता समस्या पनि हुन सक्छन् । (gnewsnepal बाट सभार)
खरबुजा ठिक्क खाए औषधि, धेरै खाए विष !!